Chautari Daily » आजको विदेशी मुद्रा : कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
आजको विदेशी मुद्रा : कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं २० साउन / आज सोमबार नेपाली बजारमा प्राय सबै देशको मुल्य बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरीकी डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १११ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै आज एक युएई दिरामको खरिददर ३० रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ।
त्यसैगरी आज एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ । आज एक कुवेती दिनारको खरिददर ३६४ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३६६ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै आज एक बहराईन दिनारको खरिददर २९४ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २९६ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।
त्यसैगरी आज एक कतारी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ ।त्यस्तै आज एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २६ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ ।
आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १३५ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति २० श्रावण २०७६, सोमबार ०७:४५